Umbhobho wentsimbi ongqindilili wentsimbi Factory | China Thick eludongeni umbhobho yentsimbi Abavelisi, Suppliers
Udonga olushinyeneyo lwempahla yombhobho wentsimbi
Indawo yokuthengisa umbhobho wentsimbi eludongeni
Umbhobho wentsimbi ongqindilili obiyelwe ngodonga, umbhobho wentsimbi onomlinganiselo wedayamitha yangaphandle ukuya kubukhulu bodonga ungaphantsi kwama-20 ubizwa ngokuba ngumbhobho wentsimbi ongqindilili. Isetyenziswa ikakhulu njengombhobho wokomba wepetroleum wejoloji, umbhobho wokuqhekeka kushishino lwepetrochemical, umbhobho webhoyila, umbhobho wokuthwala, umbhobho wolwakhiwo oluchanekileyo wemoto, itrektara kunye nenqwelomoya, njl.njl.
45 # umbhobho wentsimbi eludongeni olungqingqwa kwisitokhwe
Isitshixo somgangatho wombhobho wentsimbi eludongeni kukufana kobunzima bodonga. Ukuba udonga olungqingqwa lombhobho wentsimbi alulawulwa, luya kuchaphazela ngokuthe ngqo umgangatho kunye nokusetyenziswa kombhobho wentsimbi. Umbhobho oshinyeneyo wodonga lwentsimbi kunye nombhobho wentsimbi wodonga olungqindilili olunobubanzi obukhulu busetyenziswa ngokubanzi kumatshini ohlukeneyo kunye nokusetyenzwa kweendawo ezishinyeneyo zodonga.
Ubushushu obuphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu lwepayipi yensimbi
Umbhobho we-A333gr6 wobushushu obuphantsi ngumbhobho woshishino, olungele imibhobho yentsimbi engenamthungo kwimibhobho yenqanawa yoxinzelelo lobushushu oluphantsi – 45 ℃ ~ – 195 ℃ kunye nemibhobho yokutshintsha ubushushu obuphantsi.
I-27SiMn ipayipi yensimbi engenamthungo, oko kukuthi, i-27 ye-silicon manganese ipayipi yensimbi engenamthungo, yenye yezinto zombhobho wensimbi ongenamthungo, kwaye umxholo wekhabhoni uphakathi kwe-0.24-0.32%.
I-42CrMo i-alloy yentsimbi yomenzi wewaranti yokuthengisa